Kulan looga Tashanayo aayaha Deegaanka oo dhawaan lagau qaban doono Degmada Nambar 50 ee Gobolka Shabeelada hoose (Warbixin). | Markacadey.com
Jul 4, 2015	Naftaa-quur	-
Kulan looga Tashanayo aayaha Deegaanka oo dhawaan lagau qaban doono Degmada Nambar 50 ee Gobolka Shabeelada hoose (Warbixin).
Kolanka oo qaban qaabadiisa ay hada ka socdaan inta badan Deegaanada Gobolka Shabeelda hoose iyo qaybo ka mid ah Jubbooyinka ayaa lagu wadaa in dhawaan lagu qaban doono Degmada Nambar 50 ee Gobolka Shabeelada hoose.
Ujeedada Kulanka ayaa ah mid looga tashanayo aayaha Deegaanka iyo hormarka Shacabka Maadaama in ka badan Laba sano ay ku jiraan Dagaal dhibaato badan laga dhaxlay.
Waxaa lagu wadaa Kulan weynahan inay kasoo qayb galaan intabadan Qaybaha kala duwan ee Bulshada Shabeelada hoose iyo Jubbuuyinka si ay usoo saaraan go’aano ka dhan ah Cid kasta oo kasoo horjeeda Mustaqbalkooda.
Ilo Muhiim ah ayaa Markacadey.com u shaeegay in kulanka oo ay kasoo qayb gali doonaan sidoo kale Qurba joogta Deegaanka si ay qayb uga noqdaan wadatashiga ballaaran ee deegaankooda.
Xaaji Cumar Maxamed Cali (Moordo) oo ah Duqa Jaaliyada Sacuudi Arabaiya ee Beesha Biimaal ayaa gogoasha dhigay Nambar 50 si looga maarmo qab qablayaal ku doogsada dhiiga iyo dhibaatad shacabkooda, wax kastana ka doorbidaya danahooda qaaska ah ee ay ku joogaan Hotellada Muqdisho.
Kulankan ayaa noqon doono Mid si weyn wax uga bedela Siyaasada iyo dhaqanka Maadaama Dadka iyo Deegaankan ay u afduubanyihiin Odayaal ismagacaabay oo ujeedkoodu yahay in Marnaba aanu hormar laga gaarin deegaanka si ay meesha uga bixin dalaalnimada ay ku joogaan Muqdisho.
Hadaba Waxaan sugna ayaa ah Shir weyanah dhwaan lagu qaban doono Nambar 50 oo hada qaban qaabadiisa ay ka socoto Deegaanka.